China Four Way Radio Shuttle System orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
Ny rafi-pitaterana radio amin'ny fomba efatra dia azo ampifanarahana tsara amin'ny tontolo fampiharana manokana toy ny trano fanatobiana entana ambany sy ny endrika tsy ara-dalàna, ary afaka mifanena amin'ny toe-javatra miasa toy ny fiovana lehibe amin'ny fahombiazana miditra sy mivoaka, ary ny fepetra takiana ambony.Satria ny rafi-pandrefesana amin'ny onjam-peo efatra dia afaka manatratra ny fanitarana ny tetikasa sy ny fitomboan'ny fitaovana, dia afaka mahafeno ny fitakiana ny fandehanana an-tserasera amin'ny andiany ary mampihena ny tsindry fampiasam-bolan'ny mpanjifa.
◆ Manara-penitra ny fizotran'ny fitantanana ary manatsotra ny asa.
◆ Amin’ny alalan’ny fitantanana ny ordinatera, dia mazava ny kaontin’ny fitahirizana akora, ary marina ny toerana fitehirizana fitaovana.
◆ Fandikana ara-tsiansa, ary fitantanana fehezan-dalàna momba ny fitaovana sy ny fitoeran-javatra.
◆ Ny fidirana sy ny fivoahana rehetra dia voamarina amin'ny alàlan'ny kaody scanning, izay manatsara ny fahitsiana sy ny fahombiazan'ny asa.
◆ Fitantanana ny fitahirizana: fanontaniana mifototra amin'ny fampahalalana momba ny fitaovana, toerana fitehirizana, sns.
◆ Inventory: Ny terminal dia azo ampiasaina hisafidianana mivantana ny fitaovana hanaovana fanisana sy fanitsiana ny fanisana.
◆ Fitantanana ny log: raketo an-tsoratra ny asa rehetra rehefa mampiasa ny rafitra, mba harahina porofo ny asa.
◆ Fitantanana ny mpampiasa sy ny fahefana: azo faritana ny andraikitry ny mpampiasa mba hamerana ny sehatry ny fiasan'ny mpampiasa sy hanamora ny fitantanana.
◆ Mahatsapa ny fizarana sy ny fitantanana ny angon-drakitra fitahirizana amin'ny fotoana tena izy: ny famoahana tatitra feno araka izay ilaina, toy ny: tatitra isan'andro / isan-kerinandro / isam-bolana, ny tatitra rehetra dia azo aondrana amin'ny rakitra.
NANJING INFORM STORAGE EQUIPMENT (GROUP) CO., LTD dia manome orinasam-pitaterana fanta-daza miaraka amin'ny vahaolana rafi-pitaterana radio mandeha amin'ny lalana efatra karazana pallet.Ny rafitra dia vahaolana fitahirizana mahomby izay afaka manatanteraka asa fanasokajiana haingana sy marina, mitsitsy toerana ary manana flexibility bebe kokoa.
Ity tetikasa ity dia mampiasa rafitra fitehirizam-pitahirizana radio mandeha amin'ny onjam-peo misy rihana 4.Ny drafitra ankapobeny dia 1 lane, 3 radio shuttles, 2 mitsangana conveyors, radio shuttle dia afaka mahatsapa sosona-miova asa, ary ny rafitra dia fitaovana amin'ny seranan-tsambo maika.